ललितपुर बचत संघ - इतिहास, वर्तमान र भविष्य | दर्पण दैनिक
ललितपुर बचत संघ - इतिहास, वर्तमान र भविष्य
प्रकाशित मिति: २०७६ मंसिर १६ गते ०९:५५
सहकारी अभियानमा छाता संघको आवश्यकता धेरै छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता संघको रुपमा जब नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून) दर्ता भयो त्यसपश्चात् जिल्ला संघ पनि चाहिन्छ भन्ने आभाष भयो, ललितपुरका केही सहकारीकर्मी तथा सहकारी अभियन्ताहरुलाई । यसैबीच जिल्लास्थित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ भन्ने सपनाका बीचमा २०५० सालमा रोहिणी जोशीको अध्यक्षतामा साझाभित्र सञ्चालन भएका पारिवारिक, ऋण कोष, संकल्प, ज्योतिदय, लुभुको कल्याणकारी र स्वष्तिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु मिली जिल्ला संघ बनाउने प्रक्रिया थालनी भयो र त्यसै बर्ष संघ विधिवत दर्ता भयो ।
दर्तापश्चात् संघलाई कसरी चलाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने कसरी पैसा उठाउने र प्रारम्भिक संस्थालाई कसरी सदस्यता दिलाउने संस्थाहरु नै अलमलमा परेको वेला संघ व्यवस्थित र क्रियाशील गराउन ज्यादै चुनौती थियो । त्यसवेला संघको तर्फबाट तालिम दिनको लागि पद्मावती सहकारी लगायतमा तत्कालिन संघकी अध्यक्ष रोहिणी जोशीलगायतबाट तालिम दिइन थालियो । दिउँसोको समयभन्दा सबैलाई सहज हुन्छ भनेर तालिम साँझ ६ बजेबाट १० बजेसम्म दिइन्थो ।
उक्त समयमा संघ चलाउने पैसा थिएन । हरेकसँग पाँच सयको संकलन गरेर सुरु गरिएको संघको आफ्नो कार्यालय थिएन । संघलाई आवश्यक कार्यालय र स्टेशनरी स्वस्तिक सहकारीमा नै संचालन गरिन्थ्यो । त्यही एउटा दराजको व्यवस्था गरि माइन्यूट लगायतका कागजपत्र त्यही राखी संघलाई संचालनमा ल्याइएको थियो । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले छाता संघको सदस्यता लिएको अभिभावक नेफ्स्कूनको नवीकरण तथा तिर्नुपर्ने रकमको तिर्नको लागी संघले आफैंले सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले सञ्चालकहरुले आफैंले दामासाहीले व्यक्तिगत रकम उठाएर बुझाएको पाइयो ।
संघ स्थापना भएपश्चात् जति संस्थापक सहकारी संस्था थिए, तिनै संस्था मात्रै साधारण सदस्य संस्थाको रुपमा कायम थिए । २०५४ सालपश्चात् मात्र केही संस्थाहरु बल्ल बचत संघमा सदस्यको रुपमा दर्ता हुन आएका थिए । त्यसवेलाको अवस्थाका बारेमा अध्यक्ष रोहिणी जोशी भन्नुहुन्छ, ‘धिरेन्द्रजी सानो बच्चा बोकेर बैठकमा आउनुहुन्थ्यो भने म काखमा साना बच्चा बोकेर आई बस्ने अवस्था थियो । २०५० सालबाट २०६० सालसम्म थोरै संस्थाहरु मात्र थिए । एउटा राम्रो पक्ष भनेको महिला नेतृत्वको पहल गरि खोलिएको नेपालको यो नै पहिलो संघ हो र नेपाल पहिलो वचत संघ स्थापना पनि पहिलो नै हो भन्ने लाग्दछ ।’ २०६१ सालमा संस्थाहरु संघमा सदस्य झण्डै ३०÷३१ को हाराहारीमा थियो । त्यसभन्दा अगाडी संघको साधारण सभा बसेको थाहै हुन्नथ्यो । र, पछि मात्र साना साधारण सभा सम्पन्न हुन्थ्यो । सबैको पहलमा विस्तारै कार्यालय कुपन्डोलको स्वस्तिकबाट अर्को सदस्य संस्था पद्मावतीमा आइपुग्यो । त्यसपश्चात् केही मनमुटाव र केही पहललाई २०६४ सालमा शाक्य पुचःका अध्यक्ष धर्मराज शाक्य संघको अध्यक्ष हुनुभयो ।
२०६४ सालमा संघलाई ललितपुरको कनिवहालमा राखियो । संघलाई दैनिक रुपमा संचालन गर्न थालियो । त्यसवेला म पनि कर्जा उपसमितिमा काम गर्ने र संघको गतिविधिमा सहभागी हुने मौका पनि पाइयो । धर्मराज शाक्यको कार्यकालमा नै अन्तर लगानीको सुरुवात, दैनिक कार्यसम्पादन, रणनीति तथा योजना सदस्यता वृद्धि लगायत कार्यहरु अगाडी बढदै बचत संघ छ भन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । क्रमश: संघ सदस्य विस्तार गर्दै अगाडी बढ्यो । त्यो वेलासम्म सर्वसम्मतको रुपमा नेतृत्व चयन भएको थियो । २०६८ सम्म आइपुग्दा सदस्यताको बृद्धि प्रतिशत राम्रो भयो । त्यसपश्चात् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सहितको संघको साधारण सभा सम्पन्न भयो । उक्त साधारणसभाबाट अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामशरण घिमिरे संघका अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । सो कार्यसमितिमा मैले पनि सचिव पदमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ ।
त्यसपश्चात् संघले गतिविधी अगाडी बढाउँदै संघको कार्यालयमा तालिमलाई नियमित गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले तालिम हल सहितको कार्यालय स्थानान्तरण गरियो । संस्थाले तालिमलाई नियमित कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्यो । संघले शिक्षा तालिम सँगसँगै सदस्यता वृद्धि र अन्तरलगानी बृद्धि गरि संघलाई व्यवस्थित गराउन पहल गर्न थालियो । सो कार्यकालमा संघमा सदस्य संख्या बढ्दै गयो । ललितपुरमा रहेका बहुसंख्यक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सदस्य भइसकेका थिए । सो समयमा संघको सदस्य संस्था ४ सय नाघिसकेको थियो । सबै सदस्य संस्थाहरुबाट प्रतिसंस्था ११ हजार का दरले शेयर संकलन गरियो । संस्थामा नियमित मासिक बचत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन थालियो । सदस्य संस्थाको बार्षिक नवीकरण गराउँदै सदस्य संस्थाहरुलाई सक्रियता बनाउनतर्फ संघ अगाडी बढ्यो ।
२०७२ सालमा संघलाई ललितपुर कनिवहालबाट लगनखेलमा कार्यालय स्थानान्तरण गरियो । सेवालाई विविधीकरण गर्ने प्रयास गरियो । शिक्षा, तालिम तथा अन्तर लगानी कार्यलाई सक्रिय बनाइयो । २०७५ सालमा फागुनमा संघको २४ औँ वार्षिक साधारण सम्पन्न भयो । उक्त साधारणसभाबाट मेरो नेतृत्वमा नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचित भयो । तत्पश्चात हाम्रो नेतृत्वको मुख्य संकल्प भनेको सदस्य संस्थाहरुलाई दीगो बनाउने उद्देश्य बमोजिम सदस्य सदस्यहरुलाई निःशुल्क तालिम, अन्तरलगानी मार्फत् प्रत्येक संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुरुप सहुलियत कर्जा र सेवालाई विविधीकरण गर्दै विधी र प्रविधीमा आत्मसाथ हुँदै क्रियाशीलता प्रदान गर्नेतर्फ हाम्रो टिम लागिरहेको छ ।
संघको सेवालाई सहज बनाउँनका लागि विभिन्न ११ वटा उपसमितिमार्फत सदस्य संस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई नेतृत्व विकास प्रदान गर्ने कार्यमा संघ क्रियाशील छ । संघले ललितपुरभित्रका ५ सय ६७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सदस्यता दिएर संघमा आवद्ध गराई अभियानलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य अनुरुप क्षेत्रीय स्तरमा तालिम र गोष्ठिको आयोजना गर्दै स्थानीय तहसँग मिली सहकारी गतिविधिलाई अगाडी बढाउदै आएको छ । सदस्य संस्था बलियो नभई संघ बलियो हुन सक्दैन र संस्थालाई बलियो बनाउन हरेक व्रिmयाकलापको जरुरी छ । त्यही व्रिmयाकलापको निमित्त स्थानको अभाव भएको हुँदा अवको केही समयमा संघलाई ३ हजार वर्गफिटको हलमा लैजाने तयारी शुरु भएको छ । उक्त भवनमा अत्याधुनिक तालिम हल सहितको कार्यालय संचालनको तयारी गर्दैछौं ।
संघले सदस्यलाई बलियो बनाउन निम्न तालिम तथा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
- सदस्य संस्थाहरुलाई निःशुल्क तालिम
- वित्तिय सेवा प्रदान
- महिलाद्धारा सञ्चालित संस्थाहरुलाई सफ्टवेयर प्रदान
- महिलाद्धारा सञ्चालित संस्थाहरुलाई लघुवित्त कार्यक्रम
- राष्ट्रिय सहकारी वैंक र नेफ्स्कूनसँग साझेदारी कार्यक्रम
- संस्थाहरुमा पठनयोग्य साकोस सरोकार वितरण
- संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने प्रोत्साहित गर्ने ।
हाल संघले आफ्नो स्थापनाको २५ वर्ष पुगको अवसरमा रजत वर्ष मनायो । रजत वर्षमार्फत् सहकारी जागरण पैदा गर्दै आमजनतामा सहकारीमार्फत् मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश सदस्य संस्थाहरुमा पुर्याउन सफल भएको विश्वास लिएका छौं । रजत बर्षमा निम्न कार्यक्रमहरुमार्फत रजत वर्ष समापन गरियो ।
- गाउँपालिकास्तरिय कार्यक्रम (ऐन, नियमावली, सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया )
- नगरपालिकास्तरिय कार्यक्रम (ऐन, नियमावली, सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया )
- महानगरपालिकास्तरिय कार्यक्रम (ऐन, नियमावली, सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया )
- धान दिवसको उपलक्ष्यमा रोपाइँ कार्यक्रम
- सहकारी दौड प्रतियोगिता
- स्मारिका विमोचन
- पूर्व सञ्चालकहरुको सम्मान कार्यक्रम ।
यी माथिका कार्यक्रमले मात्र रजत वर्ष पूर्ण हुन सक्दैन । तथापी संस्थाहरुलाई दीगो र चलायमान बनाउन अहिलेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागी सहकारी भन्ने मूल नाराका साथ यसका मूख्य ३ उद्देश्यमा केन्द्रित छौँ ।
१. आम जनतामा सहकारी प्रतिको जनचेतना अभिवृद्धि गरी व्यक्ति, समुदाय र देशको सामाजिक विकासका सहकारीका विविध क्षेत्र तथा कामहरुको सम्बन्धमा जिल्लाव्यापी जानकारी गराउने,
२. देश विकासमा सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुसँग मिलेर ऐन, नियमावलीहरुलाई संशोधन गराउन पहल गरि सहकारीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,
३. सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी उत्पादनसँग जोड दिदैँ संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकास लक्ष्यहरुलाई क्रमश : कार्यान्वयन गर्दै समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउने ।
हाल सबैभन्दा चुनौती बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा देखिदै आएको छ । त्यो चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदल्ने र बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले निर्वाह गर्नुपर्ने निम्न भूमिका रहेका छन् ।
१. निम्न आय आर्जन भएका महिलाहरुलाई विशेष कार्यक्रमसहित सहकारीमा आवद्ध गराई वित्तिय तथा अन्य सीपमूलक गैर वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै जीवनस्तर माथी उकास्ने र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा समेत सशक्तीकरण ल्याई जिल्लाको मात्रै नभई देशकै गरिबी घटाउन हामी सबैले आआफ्नो ठाउँहरुबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. बचत तथा ऋण सहकारीमा एकीकरण गरि संस्था बलियो बनाउनका लागि सहकारीहरुको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुको आधारमा संस्थाहरु एकीकरण गर्दै अत्यन्तै बलियो र सबल संस्थ बनाउन पहल गर्नुपर्ने टड्कारोे आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्र, काठक्षेत्र र अति दुर्गम क्षेत्रहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु आवश्यकता भन्दा धेरै खुलेका छन् । ती संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छ । ती संस्थाहरुलाई निरन्तर छलफल, अन्तरक्रिया, बहस र भावनात्मक सहकार्य विकास गराई संस्थाहरुलई एकीकरण गराउने ।
३. बचत तथा सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सहकारीहरु स्वनियमको आधारमा चल्ने संस्था भएकोले संस्थाले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई आफैले बनाएको नियम, नीति, नियम, ऐन कानुन आफैभित्र रही चलाउनु पर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सहकारी संघसंस्था सञ्चालन गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ संस्था संचालन गराउनुपर्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पद्धतिका आधारमा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गुणस्तरिता प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थाहरु संख्यात्मक रुपमा भन्दा पनि गुणस्तरीयतामा आधारित बनाउनुपर्छ । त्यसमा दक्षिण एसियाली ऋण महासंघले उपलब्ध गराएको प्रविधि, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकहरुले प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । ती सेवाहरु जस्तै स्तरीयकरण कार्यक्रममा संस्थाहरुलाई सहभागी गराई साकोसको कारोवार गर्ने सहकारीहरुका गुणस्तरियता कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यस्तो गर्न सकेमा मात्र संस्थाको विकास भई आर्थिक र सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्नेछ । संघको रजत वर्षको अवसरमा प्रकाशित स्मारिका बाट साभार ।
बजगाईं ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका वर्तमान अध्यक्ष हुन् ।